MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: MYUTSAWMYIT ကချင်ပြည်နယ်သတင်း မှတ်တမ်း
စဂါပါကျေးရွာဒေသခံများနေအိမ်မှ ကျပ်သိန်း ၈၀ ခန့် အစိုးရတပ်များ လုယူသွား
အင်တပ်ဘွမ် (အင်တပ်တောင်) တွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားနေ
ဧရာဝတီမြစ်က ပူးပေါင်းဂိတ်သစ်ကြောင့် ဒေသခံများ အခက်အခဲဖြစ်
၀က်သက်ဖြစ်ပွားသည့် ကချင်ဒုက္ခသည်များကို တရုတ်ဆေးဆရာများ စစ်ဆေးကုသ
မြန်မာစစ်တပ်မှ (၁၄) နှစ် အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးအား မုဒိန်းကျင့်
ကချင် BGF ပိုင်မြေတွင် လူ ၂၀၀၀ ကျော် ကျူးကျော် နေဟုဆို
ဦးဇခုန်တိန်းယိန်းနှင့် မြန်မာစစ်တပ်မှ လူဝယ်ပြီး KIA ကို တိုက်ခိုင်း
ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိုင်းတောင်နှင့် တာမခန်းကြား တိုက်ပွဲဖြစ်
အစိုးရစစ်ကြောင်း တက်လာသောကြာင့် ဖါးကန့် ဒေသခံများ ထွက်ပြေးနေရ
ဟူးကောင်း ကျားထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေတွင် ယုဇနကုမ္ပဏီမှ ရွှေ တိုးချဲ့တူးဖော်
KIA တပ်မဟာ (၂) နှင့် တပ်မဟာ (၅) တွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်
ဆိုင်းအောင်ရွာတွင် KIA မှ ဗုံးဖြင့် ဆီးကြိုတိုက်ခိုက်
ဖားကန့်မြို့နယ် မော်မောလယန်နှင့် မော်မောဘွမ်ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်
မြန်မာစစ်တပ်မှ ဆိုင်းဂျာတောင်သို့ လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်
ဖားကန့်ဒေသတိုက်ပွဲ မြန်မာစစ်တပ်မှ ၁၀ ဦးထက်မနည်း ကျဆုံး
တိုက်ပွဲများကြောင့် ဖားကန့်တွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၆၀၀၀ ကျော်ထိတိုးလာ
ဖားကန့်ဒေသတွင် မြန်မာစစ်တပ်မှ ဒေသခံများအား ပစ္စည်းများ ရွှေ့ပြောင်းခိုင်း
မော်မောဘွမ်နှင့် မျောက်ဖြူတွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားနေ
ဂါးရာယန်တွင် တက်လာသော မြန်မာစစ်တပ်ကို KIA မှ တိုက်ခိုက်
ရှရော်ခ အကြီးစားပေါက်ကွဲမှုတွင် ဗမာစစ်သား တပ်ရင်းတစ်ရင်းလုံးပါသွား
ဗျူဟာမှူးမှ ရပ်မိရပ်ဖများအား အစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးစာတင်းခိုင်း
ကချင်ဒုက္ခသည် ၉သောင်းကျော်တိုးလာဟု ကချင်အဖွဲ့များ ထုတ်ပြန်ကြေညာ
KIA အား လေကြောင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ရန် အစိုးရရှေ့တန်းတပ်များက တောင်းဆိုလာ
တိုက်ပွဲကြောင့် ပျက်စီးသွားသော KBC အသင်းတော် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ အရေးမှ စစ်ပွဲ ရပ်ရေးကို ကန်တောင်းဆို
ရှရော်ခ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း ရှင်းလင်းချက်ထုတ်
စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် ရန်ပုံငွေရှာရန် KIA တပ်ရင်း (၆) မှ DVD သီချင်းခွေ ဖြန့်ချီ
အစိုးရတပ်နှင့် KIA ဒိန်ဂါဘွမ် တိုက်ပွဲတွင် အစိုးရဗိုလ်ကြီး ၂ ဦးကျ
ဖားကန့် ယူမာတွင် KIA ပြည်သူ့စစ်တို့ ဗုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်
တိုင်းမှူးသစ် ပြောင်းရခြင်းသည် မအောင်မြင်သော စစ်ရေး နမိတ်ကို ဖေါ်ပြနေ
ငြိမ်းချမ်းရေးကို အစိုးရဖက်ကသာ မျက်ကွယ်ပြု နေသည်ဟု UNFC ကဆို
လိုင်ဇာအနီး 105 မမ ရောက်နေပြီးဖြစ်ကြောင်း သမ္မတအား အကြောင်းကြား
ဖားကန့် မလန့်မှော်တွင် ဗမာစစ်တပ်မှ ရဟတ်ယာဉ်ကွင်း တည်ဆောက်နေ
KIA ဖမ်းမိသော စစ်သုံ့ပန်းထဲက ကလေး စစ်သားများကို ILO လက်ခံမည်
ဗမာစစ်သားများ အရက်မူးပြီး ဆွတ်ငိုင်ရန်ရွာအား လက်နက်ကြီး၊ လက်ငယ်ဖြင့်ပစ်ခတ်
ဖားကန့် ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ဒုက္ခသည် တဦး သေဆုံး၊ ခြောက်ဦး ဒဏ်ရာရ
မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ဘယ်ပညာရှင်ကမှ တတ်နိုင်လိမ့်မည် မထင်
ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၂၄) နယ်မြေတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
မြန်မာ့တပ်မတော် အင်အား ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသုံး၍ KIA အားတိုက်ခိုက်နေ
ပိုက်လိုင်းပျက်၍ မြစ်ဆုံ ရွှေ့ပြောင်းရွာများ ရေအခက်အခဲ ဖြစ်
KIA နှင့် ဖားကန့်အနီး နှစ်နေရာ တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာစစ်သား ၆ ဦးကျ ၁၅ ဦးထိခိုက်
ဗမာအစိုးရစစ်တပ်များ ပြည်သူများ၏ ငွေကြေး ဥစ္စာပစ္စည်းများ လုယက်ခိုးယူ
အစိုးရတပ်တွင်း အချင်းချင်းအငြင်းပွားမှုဖြစ်ပြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံး
KIA ဌာနချုပ်နယ်မြေတွင်း အစိုးရတပ်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေ
မိုးကောင်း (၈) မိုင်လမ်းဆုံတွင် ခရီးသွားများကို စစ်တပ်မှ တားဆီးစစ်ဆေး
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် အဆောင်များကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးပြန်ဖွင့်မည်
အစိုးရတပ် လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် KIA နှစ်ဦးနှင့် ရွာသား သုံးဦး သေဆုံး
တိုက်ပွဲ အဆက်မပြတ် ဖြစ်နေသည့် ကြားက KIA နှင့် အစိုးရ တွေ့ဆုံပွဲ
ကချင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော် စိုးရိမ်မိတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဖြေစကား
KIO နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည့် အချိန်နှင့်နေရာ အစိုးရ အကြောင်းမပြန်သေး
ကချင်ပြည်နယ်တွင်း အစိုးရတပ်များတပ် အပြောင်းအလဲလုပ်ကာ ထိုးစစ်ဆင်နေဆဲ
KIO နယ်မြေ နာ့ဖော့ကျေးရွာတွင် ဖြစ်သော တိုက်ပွဲတွင် အစိုးရတပ် ၁ ဦးကျ
ဗမာစစ်သားများ နန်စီအင်ရွာ တစ်ရွာလုံးရှိ လူများကို ခြိမ်းခြောက်
ကချင်ပြည်နယ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးရစေချင်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတပြောကြား
မန်ရှန်တွင် KIA နှင့်တိုက်ပွဲဖြစ် အစိုးရတပ် ၆ ဦးသေ ၂ ဦး ဒဏ်ရာရ
အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး အစီအစဉ်အရ ကချင် ဒုက္ခသည်များ ဂျပန် အကူအညီ ရတော့မည်
မြန်မာအစိုးရတပ်ကားကို KIA မိုင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ရာတွင် သေဆုံးမှုများ
KIO တော်လှန်ရေး ၅၂ နှစ်ပြည့်တွင် မြန်မာ အစိုးရတပ်စခန်းများသို့ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်
မြန်မာအစိုးရတပ် ပစ်ခတ်သော လက်နက်ကြီးကြောင့် ဖားကန့် ပြည်သူ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရ
ကချင်ဒုက္ခသည်များ အတွက် အမည်မသိ ဇနီးမောင်နှံမှ လက်ထပ် ရွှေလက်စွပ် ပေးလှူ
စီးအင်ရွာ ဥက္ကဌနှင့် မူကြိုဆရာမကို ဗမာစစ်သားများ နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်
ကချင်လူငယ်များ ငြိမ်းချမ်းရေး အမြင်သဘောထား ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်
ဒုန်ဝေါ့ တိုက်ပွဲတွင် အစိုးရတပ်နှင့် KIA နှစ်ဖက် ကျရှုံးမှုရှိ
အစိုးရတပ်များ KIA တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေသို့ စစ်လက်နက်များနှင့် အင်အား တိုးချ
စစ်ဆင်ရေး အရှိန်မြှင့် နေသ၍ ပြည်တွင်း၌ တွေ့ဆုံ နိုင်လိမ့်မည် မထင်ကြောင်း KIO ဘက်ကဆို
ဒိန်ဂျန်းတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်။ ဗမာအစိုးရစစ်သား (၂၀) ကျော်သေဆုံး ဒဏ်ရာရရှိ
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ဒေသ မော်ဝမ်းဗျူဟာကုန်းနှင့် လမောင်ကုန်းကျေးရွာတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပဖို့ UNFC ၏ အဆိုကို ဦးအောင်မင်း လက်မခံ
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ဒေသ၊ လုံးခင်းအုပ်စု ငါးမိုင်ကျေးရွာအနီးတွင် တိုက်ပွဲဖြစ် အချုပ်သား (၂) ဦးသေ
KIA အရပ်သားတပ်ဖွဲ့မှ အစိုးရခြေမြန်တပ်ကို မိုင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ၂၀ ကျော်ကျ
Obama’s Burma visit: Strategic reasons overtake human rights concerns
မငြိမ်သက်မှုကြား ဖားကန့်တွင် KIA ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲတော် ပြုလုပ်
အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရန် ကချင် ပြည်သူ များ၏ ဆန္ဒ KIO ကောက်ခံမည်
လက်ပတောင်းတောင် အကြမ်းဖက်မှုအပေါ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ၏ ထုတ်ပြန်ချက်
မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ဗမာစစ်တပ် ရဟတ်ယာဉ်ကို KIA မှ ပစ်ခတ်
လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အကြောင်း မသိလျင် စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး မတည်ဆောက်နိုင်
ကေအိုင်အေ ရှေ့တန်းစခန့် သို့ ဗမာစစ်တပ်မှ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်
မောင်ဂျန်မော် ဆွတ်ဆိုင်းယော် ၏ ကေအိုင်အေမျိုးချစ်ရဲဘော်များအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာ
ပန်ဝါဒေသ တွင် တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လျက်ရှိ၊ စစ်အစိုးရမှ စစ်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်
ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် မလေးရှား ချင်းဒုက္ခသည် အဖွဲ့အစည်းမှ အလှူငွေပေးအပ်
ကချင်ပြည်နယ်တွင် တပ်မတော်မှ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ညွှန်ကြားချက် တစ်နှစ်ပြည့်သော်လည်း တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲ
မြန်မာအစိုးရ တပ်မ ၅၅ အင်အား ၃၀၀ ကျော် တနိုင်းမှာ ရောက်
အစိုးရ တပ်များ တရုတ် နယ်ကို အသုံးချပြီး KIA ကို တိုက်ခိုက်
လဂျားယန် တိုက်ပွဲမှ အစိုးရ သုံ့ပန်းနှင့် ရှရှား ဒုံးကျည်များ
တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့ စစ်ရေးသုံးသပ်ချက်
ကိုယ့်ပြည်နယ် ကိုယ် အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့် တောင်းတာ ဘာများ အလိုမကျစရာ ရှိသလဲ?
ကချင်တိုက်ပွဲ၌ အစိုးရတပ် စစ်သုံး ရဟတ်ယာဉ်များ အသုံးပြု
၂၀၁၂ အတွင်း ထိုးစစ်မဆင်ပါဘူး၊ ရိပ်ခါလာပို့တာပါ၊ ဆိုတဲ့ ဗမာ စစ်တပ်များ နဲ့ ထိတွေ့မှု မှတ်တမ်းအချို့
KIA တပ်ရင်း ၃ နှင့် ဖြစ်သော တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာစစ်သား ၁၂ ဦးကျော် ကျ
တပ်မတော်၏ ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်၊ လက်နက်ခဲယမ်းများ၊ စစ်ပွဲများ …
အရာရှိကို ဓါးခုတ်ထွက်ပြေးသူ မြန်မာအစိုးရတပ်သား အလင်းဝင်
ဆန်ပိုင် (Sam Pai) လမ်းတွင် ပုန်းအောင်းနေသော မြန်မာ စစ်သား (၅) ဦးကျ
ဗမာအစိုးရ မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၏ သတိပေးစာကို ကေအိုင်အိုမှ ကန့်ကွက်
ပြည်ထောင်စုတပ် ဆိုတာ ကချင်ပြည်မှာ ဗမာ စစ်တပ် ရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ပါ။
တိုင်းပြည်ဂျောက်ထဲ ကျမှာစုိုးလို့ မီးတင်ရှို့ပစ်ခဲ့တယ်
လွှတ်တော်တိုင်းရင်းသားရေးရာ ကော်မတီနှစ်ရပ် ပူးပေါင်းကာ ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာအဆိုကို လာမည့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းမည်
နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် ဗမာ အစိုးရ အောက်မှာ နေလာတာ ကချင်လူမျိုးတွေ ဘာများ တိုးတက်သွားသလဲ?
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသ အစိုးရတပ် အများအပြား အင်အားဖြည့်
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်များနှင့် KIA အကြား တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်
အရပ်သားကိုပစ်မှတ်ထား လက်နက်ကြီးဖြင့် မြန်မာ့တပ်မတော်ပစ်ခတ်
အစိုးရတပ်က KIA ကို ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် တိုက်ခိုက် (မေးမြန်းချက်)
Kachin face air strikes as Burmese government’s deadline passes
ဗမာစစ်တပ် လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကလေးငယ် တစ်ဦး သေဆုံး
ဗမာအစိုးရမှ ဆဒုံ၊ ဆဂပါဒေသများတွင် ခေါင်မိုးများကို ဆေးသုတ်ခိုင်း
ဒီဇင်ဘာလ(၂၈)ရက်နေ့ မနက်(၉)နာရီမှ (၁၀)နာရီခွဲအထိ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ လဂျားယန် KIA တပ်စခန်းကို လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော မှတ်တမ်းပုံများ
ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပွဲတွေ ရပ်စဲဘို့ မင်းကိုနိုင် တိုက်တွန်း
KIA လဂျားယန်ကို မြန်မာလေတပ် ဆက်လက်တိုက်ခိုက် (အင်တာဗျူး)
ဒီဇင်ဘာ (၃၀) ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း ကချင်-ဗမာ ကျူးကျော် စစ်ပွဲ သတင်းတိုများ
လိုင်ဇာမြို့ကောင်းကင်ယံတွင် ဗမာအစိုးရ ဆင်ဖြူတစ်ကောင်ရောက်ရှိနေ
လဂျားယန် စစ်မြေပြင် ရှေ့မတိုးနိုင် သေး၍ အစိုးရက ပြင်းထန်စွာ ထပ်မံ စစ်ဆင်ဆဲ
K.I.A ကို တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းမဲ့ စစ်ဆင်ရေး စီမံချက် ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ် နှစ်သစ်ကူး အထူးသတင်း
နှစ်သစ်ကူးအကြို အထူးသတင်း KIA နှင့် စစ်တပ် ထိပ်တိုက် တွေ့ကြတော့မည်
နှစ်သစ်ကူးနေ့ မနက်ပိုင်း ကချင်-ဗမာ ကျူးကျော်စစ် သတင်းတိုများ
Bum Re Bum တွင် မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် KIA တပ် ညအချိန်ထိ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေ
တိုက်လေယာဉ်များဖြင့် KIA အားစစ်ဆင်နေခြင်း မဟုတ်ကြောင်း အစိုးရငြင်းဆို
လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကချင်ဒုက္ခသည်အရေး စိုးရိမ်
KIA ရဲ့လဂျားယန် စခန်းကို သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ အစိုးရရဲ့ကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ မဟာဗျူဟာ
လဂျားယန် ဒေသ နေပြည်တော် အစိုးရ အောက် စစ်တပ်များလက်အတွင်းသို့ ကျရောက်သည် ဆိုသည်မှာ လုံးဝ သတင်းအမှားဖြစ်ပါသည်၊
ထိုးစစ် မရပ်ပါက နောက်ဆက် ဆိုးကျိုး အားလုံး အာဏာရ အစိုးရနှင့် တပ်မတော် တာဝန်သာဖြစ်
ဇန်န၀ါရီလ(၁)ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာအစိုးတပ်ဖွဲ့မှ သိမ်းဆည်းရမိသောပစ္စည်းအချို့
သေနတ်နဲ့ ခြိမ်းချောက်တဲ့ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး မဟုတ်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှ KIA အား ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုမှာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို လုံးဝပျက်စီးစေနိုင်ဟု SYCB ပြော
လိုင်ဇာ မသိမ်း သော်ငြား စစ်ရေး အရေးပါ နေရာများ အစိုးရ သိမ်းပိုက် ထားလို
နန့်ဆန်ယန်တွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်၊ ဗမာစစ်တပ် အကျအရှုံးများ
လွတ်လပ်ရေးနေ့ မနက်ပိုင်း ကချင်-ဗမာ ကျူးကျော်စစ်ပွဲသတင်းတိုများ
ကေအိုင်အိုက ဖမ်းမိထားတဲ့ အစိုးရ သုံ့ပန်းတွေကို ပြန်လည်လွှဲအပ်လို
မလေးရှားရောက် တိုင်းရင်းသားများ ဗမာအစိုးရ သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြ
KIO အား လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဟုဆို
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ် တောင်ကုန်းအမှတ် ၇၇၁ ကို လေကြောင်းမှ စစ်အင်အားဖြည့်
မန္တလေး - မြစ်ကြီးနား အထူးရထား မိုင်းခွဲခံရ ၊ ခရီးသည် ၁၀ ဦး ခန့် ဒဏ်ရာရရှိ
Laiza Kachin news: Burmese Army killed Kachin civilians by Motors shield
ဗမာစစ်တပ် လိုင်ဇာသို့ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ် အပြစ်မဲ့ပြည်သူ နှစ်ဦးသေဆုံး
KIA မှ ဖမ်းမိထားတဲ့ အစိုးရစစ်သား စစ်သုံ့ပန်းတွေကို ပြန်လွှတ်
ဗမာအစိုးရစစ်တပ်မှ ကထန်ရွာအား လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ်
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး ပိတ်ထားရသော မြစ်ကြီးနား-ဖားကန့်လမ်း ပြန်ဖွင့်ရန် မသေချာသေး
တပ်မတော်နှင့် KIA တို့အကြား ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ခိုက်မှုများတွင် အရပ်သားများ ထိခိုက် သေဆုံးမှုများရှိလာ
အစိုးရတပ် လေကြောင်းမှ ဆက်လက် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေဆဲဟု KIO ပြော
ကချင်တိုက်ပွဲများကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများတွင် ဒုက္ခသည်ဦးရေးတိုးလာ
UWSA, SSPP/SSA, မိုင်းလားအဖွဲ့ တို့ ပူးတွဲ ထုတ်ပြန်ချက်
ကချင်စစ်ပွဲ ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ
တကမ္ဘာလုံး အပစ်ရပ်ဖို့ တိုက်တွန်း နေသည့်ကြားက လဂျားယန် တိုက်ပွဲမှာ ပြင်းထန်ဆဲ
ကေအိုင်အိုဌာနချုပ်လိုင်ဇာအနီး အစိုးရတပ် တိုက်ခိုက်မှု အရှိန်မြှင့်
ရန်ကုန်မှ မိုင်ရှစ်ရာကျော်ဝေးသည့်လိုင်ဇာသို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက်မည်
ရှေ့တိုးနိုင်ခြင်း မရှိသေးသော ဖွန်ပျန်ဘွမ် စခန်းကို အစိုးရက တိုးမြှင့် စစ်ဆင်
ကချင်စစ်ပွဲ အပစ်ရပ်ကြရန် တရုတ် တောင်းဆို၊ တရုတ်ဘက် ဗုံး လေးလုံးကျခဲ့
ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို တရုတ် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုရှိနေ
KIA အဖွဲ့ တပ်မဟာ (၂) တပ်ရင်း (၆) စခန်းဟောင်းအား အစိုးရတပ် သိမ်းပိုက်
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက် ၀၆၀၀ နာရီမှ စတင်ပြီး လဂျားယန် ဒေသရှိ နယ်မြေရှင်းလင်းမှု စစ်ဆင်ရေးများကို ရပ်ဆိုင်းမည် ဖြစ်ကြောင်း အပါအဝင် အချက် ၈ ချက်ပါ ထုတ်ပြန်ချက်ကို သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့မှ ယနေ့ည ၈ နာရီသတင်းတွင် ကြေညာခဲ့သည်။
လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာ အနာဟောင်း ကို ပြန်ဆွခြင်းလော
အပစ်ရပ် အစိုးရသတင်း ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ မြေပြင်တိုက်ပွဲများ အားပြိုင် လျက်ရှိ
ဦးဒယောင်တန်ဂွန်းလင်မယားအား မတရားပုဒ်မကြီးများတပ်ကာ တရားစွဲဆို
ဆိုင်းတောင်ဗမာစစ်တပ်မှ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် အရပ်သား တစ်ဦးသေဆုံး တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိ
လဂျားယန်တွင် တပ်မတော်မှစစ်ဆင်ရေး ရပ်ဆိုင်းမည်ဆိုသော်လည်း တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဦးဆောင်မှုအား ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံများမှ ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း (စ ဆုံး)
ဖားကန့် တိုက်ပွဲ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေ၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ တိမ်းရှောင်နေရ
သမ္မတ၏ အပစ်ရပ်အမ်ိန့်ကို တပ်မတော်လစ်လျူရှုနေဟု ကေအိုင်အေ ပြောကြား
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တာ KIA တဖွဲ့ဘဲ ခေါင်းမာပြီးကျန်တယ် ဆိုတဲ့ ဆိုက်ဝါးကို အဟုတ်ထင်နေ သူများအတွက်-
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မြေမြှုပ်မိုင်း နင်းမိသဖြင့် ကလေးတဦးသေဆုံး
ဖားကန့်မော်ကလုန် ရွာသားများအား ဗမာစစ်တပ် မှ ဖမ်းဆီးနှိ်ပ်စက်
အစိုးရလုပ်ရပ် တိုင်းရင်းသားများ၏ ယုံကြည်မှုကို ပျက်ပြားစေဟု UNA ခေါင်းဆောင်များပြော
အမေရိကန်သံရုံးမှ ကချင်စစ်ပွဲနှင့် ပါတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ချက်
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူတွေကို ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေ နှောင့်ယှက်မှုရှိ
ဒေသတည်ငြိမ်မှု မရှိ၍ မြစ်ကြီးနားနဲ့ဝိုင်းမော်မှာ လျှပ်စစ်မီးများ ဆက်လက်ပြတ်တောက်မည်။
မပခ စစ်ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်ကြီးများ အပြင်ဆေးခန်းများသို့ မသွားနိုင်
ပခုက္ကူ အခြေစိုက် အစိုးရ အမှတ် (၁ဝ၁) တပ်မဖွဲ့စည်းပုံ ပျက်သွား
KIA ကဖမ်းမိတဲ့ အစိုးရ ကလေးစစ်သားတွေ ကိစ္စ ILO ကြိုးပမ်း
ကေအိုင်အေ၏ တောင်းဆိုချက်အတိုင်း နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုကို အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှု မလုပ်ဘဲ ဆက်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ပြောကြား
အမေရိကန် သံရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အား နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ပယ်ချပြီး အသုံးအနှုံးများ အတွက် သတိပေး
ဗန်းမော် - မြစ်ကြီးနား ရေကြောင်းလမ်း ဖွင့်ပေးဖို့ ဒေသခံများတင်ပြ
ပူတာအိုမှာ ဆန်၊ လောင်စာဆီနဲ့ အခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်း ထိုးတက်နေ
KIA, နှင့် မြန်မာအစိုးရ တို့ တရုတ်တွင် ဆွေးနွေးမည်ဟု သတင်းထွက်
ဘာကြောင့် ဖက်ဒရယ်မူတောင်းကြသလဲ ...
တိုင်းပြည်ဖြင့် ပျက်နေတာ ကြာလှပြီ။ အခုထိ ပျက်မှာ ကြောက်နေတုန်း။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များနှင့် အနာဂတ် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် (ဆောင်းပါး)
အစိုးရနဲ့ UNFC နိုင်ငံရေး အကြိုဆွေးနွေးပွဲ ချင်းမိုင်မှာ စတင်မည်
လီဆူးပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ကာ လက်နက်တပ်ဆင်ပေးရန် ဗမာစစ်တပ်ကြိုးပမ်း
အမေရိကန်ရောက် ချင်းအမျိုးသားများမှ ကချင်ဒုက္ခသည်များအတွက် ၁ လ စုဆောင်းထားသောငွေ လှူဒါန်း
ကချင်ပြည်နယ် တရုတ်နယ်စပ် ဂျေယန့် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကလေးများ ၂၀ ကျော် ၀မ်းရောဂါဖြစ်ပွား
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပြန်လည်စတင်ရေး ဟားဗတ်(ဒ်)၏ အကြံပြုချက်အပေါ် KDNG တုံ့ပြန်
ဖားကန့်က စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် ကုလအကူအညီ စတင်ရောက်ရှိ
လိုင်ဇာသွား ကုလအဖွဲ့များ လုံခြုံရေးကြောင့် ကြန့်ကြာနေ
ဟားဗတ် ပညာရှင်၏ မြစ်ဆုံ ပြန်စရေး သုတေသန စာတမ်းကို ကချင် NGO ဝေဖန်
ကုလကူညီရေးအဖွဲ့များ ဖားကန့်ရှိဒုက္ခသည်များကို ဆက်လက်၍ လာရောက်ကူညီပေးလိုကြောင်း ပြောဆို
အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့နှင့် အကြိုတွေ့ဆုံပွဲ အပေါ် UNFC ကျေနပ်အားရ
လိုင်ဇာရောက် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်အဖွဲ့အား မြန်မာ့တပ်မတော်က ဖမ်းဆီး
ငြိမ်းချမ်းရေးစောင့်ကြည့်ရေးအတွက် UN ၊ US ကဲ့သို့ နိုင်ငံကြီးများ ပါဝင်သင့်
ဒီနှစ်အတွက် စစ်တပ်ဘက်ဂျက်ထွက်ပြီ... ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းတဲ့။ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း နှစ်ထောင်လောက်)
ကချင်ပြည်မှာလွတ်နေခဲ့တဲ့ ငရဲခွေး ရှမ်းပြည် ပြန်ရောက်။
ဒုက္ခသည် ကူညီရေး သြစတြေးလျ ဒေါ်လာ ၂ သန်းခွဲ ထပ်ပေးမည်
ရန်ကုန်-လိုင်ဇာ လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ အင်းတော်မြို့နယ် ရောက်ရှိ
KIO က အစိုးရ ငြိမ်းအဖွဲ့နှင့် ပြန်လည်တွေ့ဆုံရန် အဆင်သင့် မဖြစ်သေး
ဗန်းမော်တွင် မင်္ဂလာဆောင်အပြန် ကားမှောက် ၊ လူ ၄ ဦးသေဆုံး ၊ အများအပြား ဒဏ်ရာရ
အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှ အရပ်သားများကို အကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်မှုရှိဟု တပ်ရင်း (၆) ကဆို
ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ အကူညီပေးရာမှအပြန် နေမျိုးဇင်အဖွဲ့အား အစိုးရရမှ အနှောက်ယှက်ပေးခဲ့
ချီဖွေ-လော့ခေါင်တွင် တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ဟု ကျောင်းသားတပ် ဆို
KIA Masat (10), Masat (36) Dap Dung Ginra Ni Hta Laja Lana Gasat Poi Byin
ICRC နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီအဖွဲ့မှ လိုင်ဇာမြို့ ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ဝင်ရောက်ကာ ဆေးဝါးပစ္စည်းများ ကူညီပေး
Myen Asuya Hpyen Hpung Ni Ka-Ni Yi Galaw Sha Ai Ni Hpe Gumhpraw Hkan Hpyi Sha Nga
ချီဖွေ-လောခေါင်နယ်မြေသို့ အစိုးရထိုးစစ်ကြောင့် KIA တပ်စခန်း ၂ ခု နောက်ဆုတ်လိုက်ရ
ကချင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီမြစ် တလျှောက် ရွှေကျင်လုပ်သား ၃၀ ကျော် အာဏာပိုင်များဖမ်းဆီးခံရ
အစိုးရတပ်များ ကချင်ထိုးစစ် ဆက်လက် ဆင်နေခြင်းအပေါ် နိုင်ငံတကာ ဖိအားပေးရန် KWAT တောင်းဆို
Yen Kau Da Ai KIA Shawng Lam Post Ni Hpe Bai Lu Zing Madu La
ကချင် Vs မြန်မာအစိုးရ လဂျားယန်အတွင်း ၂ လ တိုက်ပွဲမှ အစိုးရတပ်မတော်မှစာရင်း
တိုက်ပွဲငြိမ်သော်လည်း ကချင်လူထု လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရဆဲ
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ မိုးကောင်းမြို့နယ် ရောက်ရှိ
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူများအဖွဲ့ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းသူများလာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်စေဖို့ HRW အဖွဲ့ တိုက်တွန်း
ပန်ဝါနှင့် ချီဖွေ-လောခေါင်ဒေသသို့ အစိုးရတပ်များ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် စစ်ရေးလှုပ်ရှားလာ
KIA ၏ နိုင်ငံရေး မျှော်မှန်းချက်နှင့် အစိုးရ၏ စစ်ရေး ပြင်ဆင်နေမှု
စီးပွားရေး စီမံကိန်း လုံခြုံရေး အတွက် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေ
၀ိုင်းမော်မြို့နယ် မုန်ဂါဇွပ် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ရေမလုံလောက်
လာမည့် KIA နှင့် အစိုးရ ဆွေးနွေးပွဲသို့ UWSA လည်းတက်ရောက်
KIO နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးဖို့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရွှေလီမြို့ ကိုရောက်ရှိ
ဗမာစစ်တပ်မှ ကေအိုင်အေ စခန်းများသို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်
KIO နယ်မြေရှိ ၁၀ တန်းကျောင်းသူ/သားများ အစိုးရ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ခြင်းမရှိ
လိုင်ဇာမြို့မှာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်တဲ့ KIA ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့
နှစ်လ နီးပါး ကြာမှ အခက်အခဲ ကြားက ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ လိုင်ဇာ သို့ရောက်
KIO နယ်မြေရှိ ကျောင်းများ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့မှ ၁၀ တန်းဖြေမည်
အစိုးရနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သော KIO ကိုယ်စား လှယ်များကို လိုင်ဇာလူထု ၂၀၀၀ ကျော် ကြိုဆို
ဧရာဝတီမြစ်ကိုဖျက်ဆီးနေသော စီမံကိန်းများရပ်ရန် တောင်းဆို
အစိုးရနှင့် KIO အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ကြိုဆို
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းဆင်း ကဒ် များကို ငွေကျပ်ထောင်ဂဏန်းဝန်ကျင်ဖြင့် ရောင်းချမည်ဟု သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အတည်ပြု
မြန်မာစစ်တပ်မှ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ ရှိနေဆဲ၊ KIA နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်
ကချင်ပြည်နယ်မှ သစ်ထုတ်လုပ်မှုများ နေ့ ည ရာချီနယ်စပ်သို့ထွက်နေ
Nam San Yang Mare Na Hpyen Yen Ni, Nat Kau Hkrum Ai Dum N’ta Ni Hpe Wa Du Gawan
တိုက်ပွဲပြီးနောက် ရှမ်းမြောက် KIA တပ်ရင်း (၁၇)သို့ ထိုးစစ်ဆင်လာသော အစိုးရတပ်များ ပြန်ဆုတ်
Laiza Muklum Hta, Ningpawt Ninghpang Gaw Da Ai Tara (Upade) Sharin Hkaja Hpawng Galaw
ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက် သဲကျောက်များ တူးဖော်ရောင်းချမှု ဒေသခံများ အိမ်ခြံထိ ရောက်လာ
စစ်ရှောင်စခန်းမှ ခရစ်ယာန် အမှုတော်ဆောင်များအား ဥပဒေရေးရာ သင်တန်းပို့ချ
တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု အခွင့်အရေး များ ကို အလေးမထားပဲ နိုင်ငံ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး မရနိုင်ပါ။
လိုင်ဇာ-မြစ်ကြီးနားလမ်း ဆိုင်ကယ်သမား အချို့ ပြန်လည်ပြေးဆွဲ
Myen Asuya Hpyen Dap Ni KIA Dap Dung (3) Ginra Kata De 81MM Gap Bun
မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် မလိယန်ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် ချက်ပြုတ်ရန် ထင်းများခက်ခဲ
နိုင်ငံသား တိုင်း နိုင်ငံ့အရေးမှာ လွတ်လပ်စွာ ပါဝင်ခွင့်ရှိမှ နိုင်ငံ တိုးတက်ပါမည်။
KIA Masat (27 ) Dap Dung, Manau Bum Lagaw Kaw Gasat Poi Byin
Lawk Hkawng Ginwang,Chik Jaw Hkyet Mayan Kaw Laja Lana Gasat Poi Byin
KIA Masat (38) Dap Dung Gawn Sam hte Kawng Hkam Mayan Kaw Hkrum Katut Gasat Poi Byin
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသည် စစ်ဗျူဟာတခု သဖွယ် အစိုးရ အသုံးချနေ
Myitkyina – Manmaw Lam Kaba hte Ginshau Htaw Madaw Lam Hpe Myen Asuya Hpyen Dap Ni Bai Pat Tawn
လူထုကို အကြပ်အတည်း ဖြစ်စေသည့် နည်းဖြင့် KIA အား ထိန်းချုပ်
တရုတ်နိုင်ငံသား သစ်ခိုးထုတ်သူများနှင့် အဂတိတရား လိုက်စားသူများကြောင့် တရုတ်ပြည်သို့ မှောင်ခိုသစ် ခိုးထုတ်မှု အရှိန်မြင့်တက်
မြေမြုပ်မိုင်း ရှင်းလင်းရေး အမေရိကန်သံနဲ့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေ တွေ့ဆုံ
Myen Asuya Balik Ni Ja Htu Masha (50) Ram Hpe Rim Woi Mat
KIA Masat (4) Dap Ba Ginra Ni Hta Laja Lana Gasat Poi Matut Byin
ဒီလအတွင်း အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ဆွေးနွေးပွဲများရှိ
အခွင့်အရေး မှန်သမျှ သူတို့ပဲ သိမ်းကြုံးယူထားတော့ တိုင်းရင်းသားတွေလဲ ခေါင်းမထောင်နိုင်ဘူး.. ဗမာတွေလဲ ဘာထူးလဲ.... နောက်ဆုံးတော့.
KIA Masat (5) Dap Dung, Namhkyi Maw Mayan Gasat Poi Byin
Myen Asuaya Hpyen Dap Ni KIA Masat (38) Dap Dung Makawp Maga Ginra, Na Sang De Htim Gasat
Dingda Ginwang, KIA Dap Dung (9) Ginra Hta Gasat Poi Byin
Myen Asuya Hpyen Dap, BGF Hpyen Hpung Ni Hpyen Yen Mung Shawa Hpe Rim Woi Mat
ဒုက္ခသည် ၇ ဦးကို အစိုးရ နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ ဖမ်းဆီးသွား
Lahta Sam Mung, KIA Dap Ba (4) Ginra Ni Hta Matut Manoi Gasat Poi Byin Nga
အစိုးရတပ်နှင့် KIA မုန်ဂိုးဒေသတွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွား
ဗမာစစ်ကြောင်းမှ ရွာသားတစ်ဦးကို ခုတ်သတ်ပြီး ချောင်းထဲပစ်ချ
ဗမာစစ်တပ်မှ ပြည်သူများ၏ အိုးအိမ်ဖျက်ကာ တပ်စခန်းတည်ဆောက်
အစိုးရနှင့် KIO မေလ မကုန်မီ တွေ့ဆုံဖွယ်ရှိ၊ လေ့လာသူများကိစ္စ ညှိနှိုင်းနေရဆဲ
အကူညီနည်းလာခြင်းကြောင့် ဇီးလွန် ဒုက္ခသည်ကလေးများအတွက် ပညာရေး စိုးရိမ်ရ
ကချင် အဆိုတော်များ လိုင်ဇာဒုက္ခသည် စခန်းတွင် အခမဲ့ ဖျော်ဖြေ
ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် (Peace Process) ဖြင့် မြန်မာ့ အနာဂါတ်ကို မျှော်ကြည့် ခြင်း အပိုင်း(၁)
Banma Kawng Gat Sa Lam Kaw Myen Asuya Balik (2) Gap Sat Hkrum
မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ဒုဗိုလ် တဦး ပြန်လွတ်လာ
တအာင်း (ပလောင်) တို့၏ ဘိန်းစစ်ပွဲနှင့် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တာဝန် (အပိုင်း ၁)
အစိုးရနှင့် KIA တပ်များ ကွတ်ခိုင်-မူဆယ် ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်း မီးဘေးသင့် ဒုက္ခသည်များအတွက် အကူအညီ လိုအပ်နေ
တရုတ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ၀င်ရောက်နေရာ ယူလာခြင်းကြောင့် ကချင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတို့တွင် ဒေသခံများ၏ မြေယာဆုံးရှုံးမှု မြင့်တက်လာ
KIO နဲ့ မြန်မာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ အပစ်ရပ်ရေးထက် နိုင်ငံရေးကို အဓိက ထားမယ်
HPA MAJAW PANGLONG AGREEMENT HPE A’SAK JAHKRUNG RA AI?
ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် အမျိုးသားကောလိပ် ဖွင့်မည်
ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဦးအောင်မင်းတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ ဆွေးနွေး
မြစ်ကြီးနားသို့ရောက်ရှိလာသော ကေအိုအိုအစိုးရ ခေါင်းဆောင်များ
စစ်မက်ဖြစ် ဒေသများ တွင် လေ့လာရေးရုံးထားရှိရေး ကေအိုင်အိုနှင့်အစိုးရ ဆွေးနွေး မည်
ရေကာတာစီမံကိန်းနဲ့ လယ်မြေ သိမ်းဆည်းမှုများ ရပ်တန့်ပေးဖို့ ကချင်ဒေသခံများ တောင်းဆို
မြစ်ကြီးနားက ပြန်လာ တဲ့ ကေအိုင်အိုခေါင်းဆောင်တွေ လိုင်ဇာမှာ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်
KIO ကိုယ်စားလှယ်များအား လိုင်ဇာဒေသခံများ (၄) ထောင်ခန့်ကြိုဆို
KIA စစ်ဗိုလ် မသင်္ကာမှုဖြစ် အဖမ်းခံရသော ဦးဘရန်ရှောင် ကို လွှတ်ပေးမည်
KIO အဖွဲ့မှ ပထမအကြိမ် ၃ လကြာ အခြေခံ စစ်သင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ်
ကချင်ပြည်တွင်းစစ် နှစ်နှစ်ပြည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်ပွဲ ကျင်းပမည်
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုများတွင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများလည်း ပါဝင်မည်
ပဋိပက္ခများ ဂယက်ကြောင့် ဗန်းမော်သားများ အထိတ်တလှန့်ဖြစ်နေ
စစ်ပွဲများမှာ လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာ၏ အကြောင်းရင်းတခုဟု အစီရင်ခံစာဆို
တရုတ်နယ်စပ် ဒွမ်ဘုန်ဂရွန် ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှော များနေ
ဇူလိုင်လအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးနိ်ုင်ရန် အစိုးရနှင့် ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ ယခုလအတွင်း နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်မြို့များ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်
KWAT မှ ဇွန်လ ၅ရက်နေ့က ထုတ်ဝေသည့် စာမျက်နှာ ၂၈မျက်နှာပါ “ချောက်ကမ်းပါး သို့ တွန်းပို့ခံရခြင်း”အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာအုပ်
တိုင်းရင်းသား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီမှ UNFC နှုတ်ထွက်
မတရားအသင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုဒ်မ ပယ်ဖျက်ပေးရေး တောင်းဆိုမည်
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အတွက် ဥပဒေ မလိုဘူး ဆိုတာဟာ စစ်တပ်ထဲမှာ အရိုးစွဲနေတဲ့ ၀ါဒ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ် CPI မှ ဆန်ထောက်ပံ့မှု ရပ်မည်ကို အောင်မြင်သာ ရွာသားများ စိုးရိမ်
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ရထားလမ်းတလျှောက် အစိုးရစစ်တပ် လုံခြုံရေး တင်းကြပ်ထားဆဲ
Hpunau SSPP/SSA Hpyen Hpung Ni Hte Myen Asuya Hpyen Dap Ts.K.Hk-16 Na Hpyen Hpung Ni Laja Lana Gasat Poi Byin
မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအပြီးတိုင်ရပ်ဆိုင်းပေးရန် ၈၈မျိုးဆက် တောင်းဆို
MAJAN (2) NING HPRING KYU HPYI HPAWNG YANGON KAW GALAW
ကချင်စစ်ပွဲသေဆုံးခဲ့ရသူတွေအတွက် ရန်ကုန်မှာ လမ်းလျှောက်ဆုတောင်း
ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးငယ်များ ကျောင်းမတက်နိုင်သေး
" ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရောင်နီလင်းတော့မယ့်လို့ တစ်ကယ်ပဲ ယုံကြည်ပါရစေတော့ . . . "
Lahta Sam Mung KIA Masat (36)Dap Dung Ginra, Namhku Mare Hta Gasat Poi Byin
ကချင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီ မြစ်ရိုးတစ်လျှောက် ရှမ်းရွာများရှိ ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့များ
ကချင်စစ်ပွဲ ၂ နှစ်ပြည့် ဆုတောင်းပွဲ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ပြုလုပ်
KIA Mung Shawa Hpyen Hpung (M.H.H) Hte Myen Asuya Hpyen Dap HK.L.Y (128) Dap Ni, Hpai Kawng Mayan Kaw Gasat Poi Byin
အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ မူဘောင် ညှိနှိုင်းရန် UNFC အဆင်သင့်ဖြစ်
ဖားကန့်တွင် တနိုင်တပိုင် ကျောက်တူးသူ ၂၀၀ ကျော် အဖမ်းခံရ
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မည့် မိုင်းရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းများ စတင်ရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေ
အစိုးရနှင့် KIO တို့ကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရာတွင် နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများ ဆက်လက်အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ပါက လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ထပ်မံဖြစ်ပွား လာနိုင်ကြောင်း International Crisis Group သုံးသပ်
K.I.O Ginjaw Komiti Salang Ni Hpe Laiza Buga Hpung Shawa ni Magun Shat Lit Gun Jaw Ai Lam
မြစ်ဆုံ အနီးတစ်ဝိုက် ပြည်သူ့စစ်များမှ မြေယာများ သိမ်းဆီးကာ ရွှေတူးဖော်
ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ အသေးစားမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ တရုတ်မှောင်ခို ပစ္စည်းများကြောင့် အများစု ရပ်ဆိုင်းသွား
Laiza Muklum Hta Ka-ni Nang Hpam Pat Jasan Lam Hpe Bawngban
ကျည်ဆံခွံ လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် ဆင်းတုတော် လိုင်ဇာမြို့သို့ ပင့်ဆောင်လာ
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း EIA အစီရင်ခံစာကို အပြစ်အနာအဆာ များသည်ဟု နိုင်ငံတကာ ပညာရှင်များ ဝေဖန်
KIO ဌာနချုပ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပ
ကေအိုင်အေတပ်ရင်း (၃၆) ဒေသ ဖိုင်ကောင်းတွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေ
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနှင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရုံနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရပြီဟု မဆိုနိုင်ဘဲ နိုင်ငံရေးအရ ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် များစွာကျန်ရှိနေသေး
ရှမ်းမြောက် KIA တပ်ခွဲ (၅) နှင့် အစိုးရတပ်များ တပ်စခန်းနေရာလု တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေဆဲ
KIO အဖြစ် သံသဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ဦးဘရန်ရှောင်အမှု အပြီးသတ်လျှောက်လဲချက်ပေးမည့်ရက် ထပ်မံရွှေ့ဆိုင်း
မူစယ်ခရိုင်အတွင်း KIA နှင့် အစိုးရတပ်တို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား
ဧရာဝတီမြစ်တွင်း စက်လှေသမားများထံမှ အစိုးရစစ်တပ် အဓမ္မငွေတောင်း
ရှမ်းမြောက်ပိုင်း KIA နှင့် အစိုးရတပ်များ တင်းမာနေဆဲ၊ ရွာသားများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်
KIA Masat (36) Ginra Hta Gasat Poi Byin Ai Majaw Mung Shawa Ni Miwa Hkran De Hprawng
Reuters သတင်းဌာန၌ ဖော်ပြသော(Special Report: Myanmar gives official blessing to anti-Muslim monks အထူးအစီရင်ခံစာ : မွတ်စလင်ဆန့်ကျင့်ရေး ဘုန်းကြီးတွေကို မြန်မာအစိုးရ ကောင်းချီးပေး) ဘာသာပြန်
ရှမ်းမြောက် ကြူကုတ် ဒေသတွင် အစိုးရတပ်နှင့် KIA စစ်ရေးတင်းမာ
KIO မူးယစ်ဆေးဝါး ပပျောက် တိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီ ဒုတာဝန်ခံဗိုလမှူးချုပ်ဇောင်းဗုခ်ထန်း နှင့် Kachinwaves media တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
KIO မှ ဖွင့်လှစ်ထားသည့်ကျောင်းတွင် အဆင်မပြေမှုများစွာရှိ။
KIO ၏ နည်းပညာ အထောက်အကူပြု အဖွဲ့များ မြစ်ကြီးနားရောက်ရှိ
မြစ်ကြီးနား-ဖားကန့် သွားလမ်းတလျှောက် အစိုးရတပ် ဂိတ်များတွင် ငွေကောက်ခံနေ
THE 1994 CEASEFIRE AGREEMENT BETWEEN THE KACHIN INDEPENDENCE ORGANIZATION AND THE BURMESE JUNTA
ကချင်ပြည်နယ်က ရှမ်းလူမျိုးတွေ အရေး ဖြေရှင်းဖို့ ကော်မတီဖွဲ့စည်း
မြစ်ဆုံ စာချုပ်နှင့် ဒေသခံများ အနာဂတ်ကိစ္စ ဒု-ဝန်ကြီးဖြေကြားမှု မပြည့်စုံ
ကချင်မြေ၌ တိုက်ခိုက်မှုများ ကင်းရှင်းလာသည်ဟု KIO ရှုမြင်
ဗမာ စစ်တပ် ရဲ့ အသလွတ် ရန်ရှာ တိုက်နည်း ဗျူဟာ ဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံရန် '၀'ဘက်က ကမ်းလှမ်းထားခြင်းမရှိ
ပဋိပက္ခကို ဖြေရှင်းရန် UWSA နှင့် အစိုးရအဖွဲ့တို့ ရက်သတ်မှတ်
အစိုးရနှင့် KIO တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု တွင် ‘သီးသန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး’ ကိစ္စ ဆွေးနွေး သင့်ဟု KNO ပြော
ကေအိုင်အိုကိုယ်စားပြု Technical Advisory Team အလုပ်အဖွဲ့ရုံးကို ဇူလိုင် ၂၀ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်
ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ထုတ်ရေး သဘောတူညီချက်များ သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲ ပြီးဆုံး
KIO ၏ Technical Team ရုံးကို ဇူလိုင်လ ကုန်ပိုင်းတွင် ဖွင့်မည်
၀ိုင်းမော်-လိုင်ဇာ သွားလမ်းရှိ ကျေးရွာများတွင် အစိုးရတပ်များ အခွန်ဖြင့် ရွှေတူးဖော်ခွင့်ပြု
တပြည်လုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ... မတရားသင်းအဖြစ်မှ ကင်းလွတ်ခွင့် ... အခြေပြမိန့်ခွန်း
အစိုးရ၏ တပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးပွဲအပေါ် တိုင်းရင်းသား သဘောထားများ
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ဒုက္ခသည် ပြန်ပို့ရေးကိစ္စ UNFC နဲ့ UNHCR တာဝန်ရှိသူတွေ ဆွေးနွေး
J/W A MYU NI HPE GA-GARAN MA HKRA GALAW NGA AI MYEN ASUYA
ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်ကို မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် စီရင်ချက်ချ
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော် အကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်
သမ္မတနှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တို့ သဘောတူညီမှု ရရှိပြီးမှသာ တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် ဆွေးနွေးရန် ထုတ်ပြန်
ရှမ်း/မြောက်၊ကွတ်ခိုင်ပတ်ဝန်းကျင်မှ မြေ ဧက (၆၀၀,၀၀၀) ခြောက်သိန်းအား သိန်းစိန်အစိုးရ မှ တရုတ် ကို နှစ်(၃၀) စာချုပ်ဖြင့်ငှားရမ်း
မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်လာပြီ
ဒေါ်ဘောက်ဂျာက သူ့ကို ဖမ်းဆီးတာဟာ တရားမျှတမှု မရှိဘူးလို့ပြော
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးရန် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့အားလုံး၏ သဘောတူညီမှု မရသေးဘဲ အဖွဲ့ လေး၊ ငါးဖွဲ့လောက်နှင့်သာ သဘောတူထားသည်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းပြောကြား
တရုတ်နယ်စပ် ဇိုင်းအောင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် TV ဓါတ်မှန် မရှိမဖြစ် လိုအပ်
ဒေါ်ဘောက်ဂျာကို မြစ်ကြီးနားနေအိမ်မှ ဖားကန့်ရဲစခန်းသို့ ဖမ်းဆီးထား အမှု ၃မှုဖြင့် တရားစွဲ
တိုင်းရင်းသားများ လိုချင်သည့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဖြစ်စေရန်အတွက် တိုင်းရင်းသားအားလုံး ပါဝင်သည့် ညီလာခံတစ်ခု ကျင်းပရန် တောင်းဆို
ကေအိုင်အို ဌာနချုပ်ရှိ ကူမင်းအမျိုးသားကောလိပ်၏ ပထမဆုံးနှစ်သင်တန်း ဩဂုတ်တွင် ဖွင့်ပြီ
အစိုးရနှင့် KIO တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်းအဖြေရှာမည့် အလုပ်အဖွဲ့ရုံး ယနေ့ဖွင့်ပြီ
မြစ်ကြီးနား KIO Technical Advisory Team ရုံး ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ (ဓါတ်ပုံ)
ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်ကို ယနေ့လွတ်မည်ဟု ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းပြော
ပူတာအိုမြို့ တွင်လေယာဉ်ကွင်းတိုးချဲ့ မှုတွင် ဒေသခံတစ်ချို့ ၏ အိမ်ယာများ ပါဝင်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း KIA တပ်များနှင့် အစိုးရတပ် တိုက်ပွဲဖြစ်နေ
သမ္မတလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွှတ်မြောက်လာသော ဦးဘရန်ရှောင် အား ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်း ကိုယ်တိုင် စခန်းသို့ ပို့ပေး
KIO သည် Technical Team ရုံး ဖွင့်နိုင်သော်လည်း Team ဖွဲ့ရန် အခက်တွေ့နေဆဲ
တပြည်လုံးအပစ်ရပ်ရေးတွင် အစိုးရနှင့်တပ်မတော်ကိုယ်တိုင်ပါ လက်မှတ်ရေးထိုးသင့် UNFC ထောက်ပြ
ဒေါ်ဘောက်ဂျာ အမှု ရုံးချိန်း ထပ်ပေးလိုက်၊ အာမခံ မလျှောက်သေး
ဝ တပ်ဖွဲ့သွားလာလှုပ်ရှားမှု အစိုးရတပ်စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်နေဆဲ
KIA ပြည်သူ့စစ် တပ်ခွဲ (၅)နှင့် အစိုးရတပ်များ ဆက်လက် တင်းမာနေ
တပြည်လုံး အတိုင်းအတာ ဆောင်သော တိုင်းရင်းညီလာခံ ဖြစ်မြောက်ရေး UNFC ပြင်ဆင်
ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရတပ်များနှင့် တိုင်းရင်းသားတပ်များ တိုက်ပွဲဖြစ်ကာ ဆက်လက် တင်းမာနေဆဲဟုဆို
ဒေသခံတောင်သူနှင့် (L.G.M) ကုမ္မဏီ နှစ်ရှည် ပင်စိုက်ခင်း အငြင်းပွားမှု
၂၀၁၃ မဂ်ဆေးဆေးဆု ကချင်အမျိုးသမီး ဒေါ်လဖိုင်ဆိုင်းရ်ာလည်း ရရှိ
ကချင်တိုင်းရင်းသူ လဖိုင်စိုင်းရော် ၂၀၁၃ Megsaysay ဆုချီးမြှင့်ခံရ
သမ္မတလိုလားချက် တိုင်းရင်းများ ဖြည့်သင့်သလို တိုင်းရင်းလိုလားချက်လည်း သမ္မတမှ ဖြည့်ဆည်းသင့်
ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်သောဒေသရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းများအတွက် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ ရောက်ရှိမှု နည်းပါး
ပူတာအိုခရိုင် ဆန်ပြတ်လပ်မှု ပြောင်းနှင့် မျှစ်များ အစားထိုးနေရ
ကချင်ပြည်နယ် NDF ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်ဘောက်ဂျာ ဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင် တရားရင်ဆိုင်ရမည်
ကချင်နှင့် ရှမ်းမြောက်ရှိ ဒုက္ခသည်များအတွက် နှစ်နှစ်အတွင်း ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၇၀ သုံးရန် လျာထား
ကေအိုင်အေက ချွေးတပ်ဆွဲခြင်း၊ ဆက်ကြေးကောက်ခြင်းတို့ကို တိုင်ထားသည့်စာများ ရှမ်းဝန်ကြီးက ဦးအောင်မင်း ထံပေး
မတရားအသင်း ပုဒ်မ ဖြင့် ဖမ်းဆီး ခံထားရသော ကချင်အမျိုးသား အများစု မလွှတ်သေး
အသိအမှတ်ပြုမှု နဲ့ တာဝန်ယူမှုအပိုင်းမှာ ဘောင်ကျော်ရင် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးထိခိုက်နိုင်
စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရချင်ရင် သမ္မတကြီး ကြားနေသင့်
ရီမွန်မက်ဆေးဆေး ဆုလက်ခံယူရန် လဖိုင်ဆိုင်ရော် တက်ရောက်ရန်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံမှ Ramon Magsaysay ဆု ဒေါ်လဖိုင်ဆိုင်းရော် ကို ချီးမြှင့်
Lahta Sam Mung, Muse Kaw Galaw Ai Ka-ni Nanghpam Pat Jasan Bawngban Hpawng Ngut
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးခြင်းအပေါ် ဥပဒေကြောင်း အခြေခံမှ သုံးသပ်ချက်
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း အစိုးရနှင့် KIA တိုက်ပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်ပွား
အစိုးရတပ်မှ KIA နယ်မြေသို့ လှုပ်ရှားမှုများလာ တင်းမာနေဆဲ
မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူ ၆၀ ကျော်ကို KIO ဖမ်းဆီး အရေးယူထား
မိုးတွင်းဖြစ်တတ်သော ရောဂါများ ၅ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များတွင် အဖြစ်များ
MYEN ASUYA A MUNGDAN TING GAP HKAT JAHKRING MAYU AI MASING
တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန် သွားနေသည်ဟု UNFC ပြော
အစိုးရ၏ ဒုက္ခသည် ပပျောက်ရေး စီမံချက်ဖြင့် ဆောက် လုပ်ပေးသော အိမ်ယာ သို့ နေထိုင် ရန် ဆန္ဒမရှိသူ များ
KIA တပ်ရင်း (၃၆) စခန်း ညသန်းခေါင် အချိန် အတိုက် ခံရ၊ ကချင် လေးဦးကျ
၂၀၀၈ ဥပဒေကို လက်မခံသော်လည်း UNFC လှုပ်ရှားမှု မထိခိုက်နိုင်သေးဟု ထိုင်းလုံခြုံရေးအရာရှိပြော
မြန်မာနိုင်ငံတော် ကိုယ်စားပြု သတင်းစာ၏ ဗြောင်လိမ်ချက်
၂၀၁၄ အမှီ ကလေးစစ်သား လုံးဝ ပပျောက်ဖို့ မြန်မာ ချမှတ်ထား
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိပါဟု ပြောဆိုခဲ့သူ ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်ရန် ရှစ်လေးလုံး ငွေရတုတွင် လက်မှတ်ထိုး
ဖက်ဒရယ် စနစ်အတွက် လိုအပ်ပါက ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရမည်ဟု ဦးရွှေမန်း ပြော
အဖွဲ့ဝင်သစ်များ လက်ခံရေးကို UNFC ညီလာခံတွင် ဆုံးဖြတ်မည်
မြောက်ပိုင်း ABSDF လိုင်ဇာတွင် ၈ လေးလုံးအခမ်းအနားကျင်းပ
8.8.88 Masat Ninghtoi (25) Ning Hpring Ai Hpawng Lamang Hpe Laiza Kaw Galaw
KIA နှင့် ရက်ဆက် တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေခြင်းသည် ပြည်နယ်မူကို လက်မခံ ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဟု MPC ကဆို
ဗန်းမော်ခရိုင် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ် လမ်းပေါ်တွင် သုံးရက်အတွင်း တရုတ်ပြည်သို့ ခိုးထုတ်သည့် သစ်ကား ၅၇ စီးဖမ်းမိ
Laiza Kaw Share Shagan Masat Ninghtoi Hpawng Galaw
Mungbaw, Mungshawa Ni A Ka-ni Nanghpam Pat Jasan Hpung Hpaw Ai Laning Myi Hpring Hte Hkaw Tsun Hpawng Lamang Galaw
နယ်ခြားစောင့်တပ်နှင့် KIO တို့ လောခေါင်တွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားပြန်ဟုဆို
ကချင်ပြည်နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းမှ လိုင်ဇာသို့ ပစ္စည်းများ သွားရောက်လှူဒါန်းရန် ကေအိုင်အို လက်မခံ။
ကြက်ခြေနီအသင်းက စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို လှူဒါန်းခြင်း KIO လက်မခံ
အစိုးရအာဏာ မသက်ရောက်သည့် ဒေသများကို တစ်နှစ်အတွင်း တစ်ကြိမ်သာ ကုလသမဂ္ဂကူညီနိုင်ခဲ့
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ဂိတ်များမှ တရားဝင် ဖြတ်သန်းခွင့် ယခုလကုန် စတင် ခွင့်ပြုမည်
ဒေါက်တာတူးဂျာ ဦးဆောင်သော ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီ (KSDP) စတင်တည်ထောင်
ပန်ဝါမြို့ရှိ လာဝေါ်နှစ်ခြင်းဘုရားကျောင်းတွင် ဗျုဟာထိုင်မှုအား ဒေသခံများ အလိုမရှိ။
ဘူးဂါး လျှပ်စစ် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှာ အဆိပ်ငွေ့ တစ်မျိုးကို ရှုရှုက်မိသဖြင့် သေဆုံး
► November 20 - November 27 <